SHIRKII MAANTA UU ABDI ILEY QABTAY SIDAAN BUU U DHACAY | Faafan News
SHIRKII MAANTA UU ABDI ILEY QABTAY SIDAAN BUU U DHACAY
M/W deegaanka soomalida mudane:- cabdi ilay ayaa maanta dhamaan shaqaalaha dawlada ugu baaqay inay isagu yimaadan shir degdeg ah .
Cabdi ayaa sidii caadada u ahayd maanta oo dhan ku caraatamayay aflagaadana ugaystay shaqaalaha dawlada deegaanka.
Cabdi ayaa maanta oodhan ka sheekaynayay shirkii 27 bishin kadhacay minneapolis cabdi oo islahaa adiga la’aanta shir wax qaban kara majiro amaba uusan horoy u arkin wax dulmigiisa diidan ayay qaadasho waa ku noqotay sidii shirku udhacay xalay..
Cabdi ayaan seexanin 54 saac ee udanbeysay sababo cilada kahaysata dhanka dadka dulmi.diidka ah iyo isagoo indhaha ku hayay cidii shirka kaqayb gasha.
Cudur-daar: waxaan ka cudur-daaranaynaa in waxyaalaha dadkii shirka joogay maanta nala wadaageen ay yihiin wax qof caadi ah uuna marna rumaysan karin ama aan gali karin caqliga caadiga ah. Balse waan xaqiijinay waxaana qaadanaynaa masuuliyadda hadii hal erey ka soo noqdo xogtan amakaaga ah ee aan idinla wadaageeyno.
Madaxweyne Cabdi Iley hadaladii uu maanta ku hadalay hadaan soo koobno:
1. 21 jeer ayuu maanta yidhi “[maxayga] hooyadood ha waxeeyaane”. Nacalaa aabahood ku yaalna wuxuu sheegay 27 jeer.
2. Nacalaa aabahood ku yaal [beesha Jidwaaq] waad ogaan doontaan haddaana sidii beesha reer Isaaq laf laf u kala saarin Baha Xassan, Baha Abaskuul, Haruun Bari, Ba Dhulbahante, iyo Baha Axmed oo dib loo maqlo magacoodaba
3. Wiil Bartire ah, Cabdiraxman Ismaaciil Cabdilaahi( Idaajaa) oo u shaqeeya Xafiiska dakhliga, oo lagu eedeeyay in uu qof ku yidhi Abdirisaq Saxane ayaa liiska dadka arimihii Oromadda loo qabanyo aad ayuu madaxweynuhu u caayay; markii shirku dhamaadayna wuxuu ku yidhi waryaa haddadan iiga tag shaqadayda. Wiilka waxaa kale oo lagu eedeeyay inuu dad ku yidhi “guryaha boobka lagu dhistay taayirro ha loo yeelo”. Iyo in waliba xafiiska uu ka shaqeeyo arin ka dhacday xogtii in markiiba Cabdirashid Cali Shucaac loo gudbiyay.
4. Markuu shirku dhamaaday wuxuu haweenkii ku yidhi raali ahaada maanta “bahalkii dumarka”’ayaan ku dheeraaday caydiisee (magac kale ayuu sheegay anagaa ka xishoonay sidiisa inaan u soo gudbino).
5. Xafiiska PSNP nin ka shaqeeya ayaa yidhi, Madaxweyne dadka la kari la’yahay reer abtigaa ayaa ugu horeeya. “Waan ogahay, bahalkii hooyadood waxaa ha ku sameeyaane”’ayuu Madaxweynuhu ku jawaabay.
6. Afhayeenka iyo Madaxweyne ku xigeenka ayaa hadlay oo yidhi ciddii Madaxweyne Cabdi ku socotaa horta anaga ha naga gudubto; anagaa deyr u ah.
7. Ilmo Bade: aFlagaado iyo hanjabaad aad u badan. Kuligood waa eey way arki doonaan.
8. Nacaalaa aabahood ku yaalka leh guryaha Jigjiga ayaa taayiro loo xidhi iyagaan taayirro kuwada xidhi doonaa.
9. Kuwan waan shiraynaa leh waxay u socdaan waa Ogaadeen.